AKHRISO: Labadii Arrimood Ee Lagu Wiiqay Awoodihii DMD Iyo Dhallinyarta JW & Qaabka Ay Mar Kale Isku Muujin Karaan - Jigjigaonline
HomeSomalidaAKHRISO: Labadii Arrimood Ee Lagu Wiiqay Awoodihii DMD Iyo Dhallinyarta JW & Qaabka Ay Mar Kale Isku Muujin Karaan
September 19, 2019 admin Somalida, Wararka Maanta 3
Awood markaad rabto inaad la dagaalanto udub dhexaadka awoodaas ayaa la fujiyaa/la burburiya. Hadaad rabto inaad adhi soo rogtana waa lamidooo madaxaa laga maraaa, markaa kadib ayaa la soo ragaa hadaadan madaxa ka marina ma soo rogi kartid.
Waxaan tusaalayaasha sare uga dan leeyahay awoodii DMD ama dhalinyarta Jidwaaq ee ku dhaqan deegaanka markii la rabay in la naaqusiyo Waxaa laga bilaabay madaxa.
1. Madaxdii iyo kuwii dadku kalsoonida u hayeen ee dadku ku daba fayshanaayeen ayaa xil loo dhiibay qaarna balanqaadiyo ayaa loo sameeyay iyada oo la rabo in awoodooda dhulka lala galo oo la kala tuuuro, kalsoonida loo qabana ay burburto.
Intaas kadib Waxaa awood yeelatay dhalinyartii JW ee ku dhaqnayd deegaanka gaar ahaan Jigjiga. Step 2 ayaa loo soo fakaray iyadoo isla bartii oo kale laga bilaabayo. Bal hada u fiirso!
2. Gudoomiyihiin dhalinyarta ayaa xil loo magacaabay iyada oo looga dan lahaa in awooda dhalinyarta la kala tuuro kadibna sidii doono laga yeelo. ( Ha i khalad fahmina anigu kama soo hor jeedo in dhalinyarta xil loo dhiibo). Waaba waxaan u dagaalamayno in ay wadanka iyagu maamulaan lkn siyaasada la inala ciyaarayo iyo u jeedooyinka inaan fahano waa lama huraan.
Way soo socotay hadana Gudoomiyihii hore Maasha Allah si fiican buu yeelay xilkiina wuxuu ku wareejiyay Gudoomiye ku xigeenkii.
Hadana dhalinyartii Gudoomiye ayay yeelatay. Hadana wadadii la mari jiray ee ahayd madaxa goo, ayaa la maray Gudoomiyihii dambena xilbaa loo magacaabay. Intaas dhan Maxaa loo dan leeyahay? Waxaa loo dan leeyahay in ay burburaan oo ay bilaa awood noqdaan kadibna sidii doono laga yeelo sidii Abdi Yare oo kale la dulaysto 10 sano oo kale. Dhulkooda la boobo la dulaysto wax kasta oo lagu samayn karana lagu sameeyo.
Kadib sidii la doonayay ayay noqotay dhalinyartii madaxaa la gooyay, Gudoomiyihii dambena waajibaadkiisii ma gudan dhalinyartiina ma habaynin Gudoomiyenimadiina iskama warejin ilaa hada. Waxaana ku dhiiro galin lahaa inuu wareejiyo dhalinyartana isku habeeyo.
Weelkaad wax ku cunto waa la maydhaa isaga oo nadiif ah baa laga tagaa waayo bari waa midkaad ku soo noqon lahayd waxaana qurux badan inaad isagii oo maydhan aad ku soo noqoto. Fikirkaagii iyo Waxaad aaminsanayd marka xil laguu dhiibo inuu xaga kale iska rogo ma aha. Waa hadaadan xil raadis ahayn oo uu waxaagu mabaadii iyo hadaf aad aaminsanayd uu ahaa.
Qoraalkan dhaleecayn ama xumayn ama weerarid aan cid weerarayo igama aha ee dhiiro galin, baraarujin iyo wax fahansiin bay iga tahay oo kaliya.
Hadii uu qof u arko inaan isaga u jeedo uma jeedo cidna lkn waxaan baraarujinayaa oo kaliya umadan aan loo ogolayn inay awood yeeshaan markaa waad ka raali noqon.
Markii Gudoomiyaha dhalinyarta xil loo dhiibaba waa inaan inaguna mid kale keeno si waxa lala rabo dadka ayna u dhicin. Hey! And that’s good idea, dhalinyarta dhan baaba inoo shaqo gali.
Waxa qoray: Dhaqane Dabcasar
Itoobiya Oo Jawaab Adag Ka Bixisay Qorshaha Cusub Ee Masar Ka Keentay Biyo Xidheenka Wabiga Niil
waxaan u arkaa war xaqiiqo iyo sixitaan Guud
midnimo iyo wadajir waa lagama maarmaan
waxaa suno ah hadii xataa laba qof wada safrayaan in midkood kakale maaamulo iskuna ixtiraamaan markaa waxaan soo jeedin lahaa in degdeg loo sameeyo cid dhalinta hagta midnimadana ka shaqaysa
H. Khadar Siyad (HK) says:
Allah yacizak wll waxaad ka hadashey xaqiiqo jirta,
Balse waxaan usoo jeedinaya dhalinta beesha in ay muujiyaan isku duubni awood iyo dadaal isla markaana ay si deg deg ah u samaystaan gudoomiye cusub,